Home News Madaxweyne Farmaajo: Fadlan jooji ku xadgudubka joogtada ah ee walaalaha Jabuuti iyo...
Madaxweyne Farmaajo: Fadlan jooji ku xadgudubka joogtada ah ee walaalaha Jabuuti iyo fudeydka siyaasadda aanad fahmin waxa ka jira mandaqadda
Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aya halqabsigii ay ku barteen shacabka Soomaaliyeed waxa uu aha wadaniyad, wuxuu sheegan jiray in ay ka go’antahay dowladnimada iyo ilaalinta qaranimada Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo aya safarkiisii ugu horreeyay ee uu ku tagay dalka Eriteriya waxaa uu ka codsaday caalamka gaar ahaan Qaramada Midoobay in cunaqabateynta laga qaado dalka Eriteriya, kaasoo dagaal uu kala dhexeeyo walaalaha reer Jabuuti oo ay weli ka haystaan maxaabiis dagaal oo gaaray boqolaal.
Intaa kuma uusan ekaan ee Madaxweyne Farmaajo waxa uu been cad ka sheegay in uu isaga ka danbeeyay wada hadaladii nabad raadinta ee ay bilaabeen dalalka Jabuuti iyo Eriteriya, balse waxaa taa beeniyay dalalka Sucuudiga iyo Imaaraadka kaddib markii ay isugu keeneen dalka Sucuudiga labada hoggaamiye ee Eriteriya iyo Jabuuti, waxaana ku wehliyay oo kaliya RW Itoobiya Abiy Axmed.
Arrintan aya fajac ku noqotay shacabka Soomaaliyeed markii ay arkeen beentii lagu yiqiin Farmaajo in ay bannaanka soo baxday oo waxa uu sheegay aanay waxba ka jirin. Maalmo kaddib markii uu sheegtay in uu ka shaqeeyay isku soo dhaweynta labada dal ee Eriteriya iyo jabuuti ayaa waxaa shir ka dhacay magaalada Kismaayo waxa ay madaxda dowlad goboleedyada xiriirka ugu jareen dowladda Federaalka ah ee uu hoggaamiya Madaxweyne Farmaajo oo ilaa maanta aanan wax xal ah laga gaarin.
Waxaa maalintii shalay ahayd yimid magaalada Muqdisho wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Itoobiya iyo Eriteriya iyagoo u ololeeynaya sidii loo dedejin lahaa in lagu soo daro ciidamada AMISOM ciidanka Eriteriya oo dhawaan laga soo qaaday xuduuda Itoobiya iyo Eriteriya ciidankan oo laga cabsi qabo in aay afgambiyaan kali taliska xukuumadda Eriteriya.
Waa Markii seddex oo uu Farmaajo xaqiro walaalaha Jabuuti. Farmaajo ayaa booqasho ku tagay dalka Eritrea iyadoo ay jirtaa colaadii jabuuti iyo Eriteriya, isagoo aan ka hadlin dhulka iyo dadka jabuuti laga haysto oo uu addiunka ka codsaday in Eritrea cuna Qabateynta laga qaado.
Previous articleMarkii ugu horreysay muddo 27 sano ah oo Madaxweyne ku ammaano golahiisa wasiirada waxqabad la’aan
Next articleShacab ku bannaanbaxay xukuumadda oo lagu xabadeeyay agagaarka Tiyaatarka Qaranka iyo waxyeelo ka dhalatay (video)
Farmaajo: Xassan Cali Kheyre Safarkiisa waa joojinay hadii u baxana wakiil...
Maxa Ka Cusub Xaalada Dooni Dhawan Ku Caarisay Biyaha Bada Boosaaso